KFO: 'Dorgommiin yoo dhufe dhaabni tokko isa tokko irratti hin dogomu' - BBC News Afaan Oromoo
KFO: 'Dorgommiin yoo dhufe dhaabni tokko isa tokko irratti hin dogomu'
Image copyright Marsaalee Hawaasaa
Kongireesii Federaalawaa Oromoo (KFO) Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) waliin dantaa Oromootiif jecha walitti dhufanii hojjechuuf mari'achaa akka jiran Itti-gaafatamaan Ijaarsa Siyaasaa KFO Obbo Olbaanaa Leellisaa BBC'tti himan.
Suuraaleen hogganoota dhaabbilee lamaanii marsaalee hawaasaa irratti bal'inaan qoodamaa jira.
Dhaabbileen lamaan akka dhaaba tokkootti hojjechuuf mari'achaa akka jiranis yaadoleen adda addaa kennamaa jiru.
Mariin dhaabbilee lamaanii kun waamicha Eebla 17 KFO'n dhaabbilee siyaasaa Oromoo mirga saba Oromoof haqaan qabsaa'aa jiraniif dhiyeessee bu'ura godhachuuni akka ta'e Obbo Olbaanaan ni dubbatu.
Dhaabichi dhimmoota yaaddessoodha jedhe ja'a Oromiyaa keessatti uumamaa jiraniif furmaata atattamaa barbaaduuf waamicha kana akka dhiyeesses himu obbo Olbaanaan.
Lammileen qe'eefi qabeenya isaaniirraa buqqa'uu, walitti bu'insa Walloo, Shawaa Kaabaafi Bahaatti uumaman, Finfinnee fi naannawaa Finfinneetti haala faayidaa uummataa hin eegneen hojiiwwan akka feeteen hojjetamaa jiraan, Wal dhabdee mootummaa fi ABO gidduu jiru akkasumas dhimmoota Federaalizimii waliin walqabatan keessatti argamu.
Dhimmoota kana furuuf dhaabbilee siyaasaa kaan waliinis mariin wal fakkaataan itti fufa jedhu.
ABO waliin tokkoomuu
Yaada KFO'n ABO waliin tokko ta'uufi jedhu ilaalchisee "ammatti haalli jiru gara kanatti nu geessuu baatus garuu, dorgommiin yoo dhufe dhaabni tokko tokkorratti hin dorgomu" jedhu Obbo Olbaanaan.
Uummata keenya burjaajessuudhaaf bakka tokkotti uummata keenyatti filannoo baay'ee hin dhiyeessinu jedhan.
"Deggarsa walgitu saba keessatti waan qabnuuf tokko taanee akka dhaaba tokkootti dorgomna malee akka dhaaba lamaatti akka hin dorgomne irratti mari'atamaa jira" jedhu.
Gara dhaaba tokkootti dhufuudhaaf karaa ABO gama seeraan waanti dura xumuramuu qabu jira kan jedhan Obbo Olbaanaan, inni dhumus dhumuu baatus garuu akka dhaaba lamaatti dorgommiitti akka hin dhiyaanne walii galteerrra ga'ameera jedhan.
Dhaabbileen siyaasaa Oromoodhaaf hojjetan gara tokkootti dhufuun kan barbaachisuuf wareegama barbaachisu xiqqeessuudhaaf kan jedhan Obbo Olbaanaan, biyyattii keessattis tasgabbiin akka uumamu ni taasisa jedhu.
Tokkummaan Oromoo jabaachuun ykn waliin mari'atanii hojjechuun bu'aa gurguddaa fidee, kasaaraa jiraachuu malu ammoo ni xiqqeessa jedhu.
"Naannoo Oromiyaatti amma rakkoo keessoo yoo ta'e malee inni alaa waan baay'ee dhiibee dhufu miti. Humni alaa baay'ee dhiibee qabsoo Oromoo sodaachisu hin jiru. Inni keessaa garuu gara tokkotti qulqullaa'uu qaba."
Akka Obbo Olbaanaan ibsanitti, rakkoon walitti bu'insaa bakka kanaan dura dhalatee hin beeknetti dhalataa jira.
"Fakkeenyaaf, kanaan dura Walloo, Shawaa Kaabaafi Shawaa Bahaatti uumamee hin beeku. Kan kaanaan dura naannoo Harargee, Booranaa ture bakka haaraatti darbee uumamaa jira."
Rakkoo kana furuuf dhaabbileen siyaasaa Oromoo walitti siqanii hojjechuu qabu jedhan.